मुटुरोगीमा क्रिटिकल कोभिडको जोखिम ! « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७८, २४ मंसिर शुक्रबार १४:३३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । मुटुरोगीहरुलाई क्रिटिकल कोभिड हुने जोखिम उच्च हुन्छ । संसार एवं शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको तथ्याङ्कले पनि कोभिड भएका मुटुरोगीलाई धेरै जटिलता हुने र मृत्युदर पनि दिनानुदिन बढेको देखाएको छ ।
कोभिडले मुटुलाई गर्ने असर
सामान्य त कोभिडले फोक्सोलाई असर गर्छ । कोभिडसँग प्रतिरक्षा गर्न निष्कासन हुने एन्टिवडीले इन्फ्लामेसन गर्छ । त्यही इन्फ्लामेसनले मुटुलाई पनि असर गरेको देखिएको छ । सो प्रक्रियामा शरीरका विभिन्न रगतको धमनीहरुमा थेग्ला जम्नसक्छ । जस्तोः खुट्टामा रगतको थेग्ला जमेमा भेनस थ्रोम्बोसिस हुन्छ । यदि रगतको थेग्ला फोक्सोको नसाहरुमा गएर घातक रुपमा पल्मोनरी थ्रम्बोइम्बोलिजम जस्ता रोगहरु गराउन सक्छ ।
यसरी कोभिड संक्रमणले हृदयघात, पल्मोनरी थ्रम्बोइम्बोलिजम र मस्तिष्कघात हुनसक्छ । कोभिड भाइरसले मुटुको मांशपेशीलाई असर गरेर भाइरल मायोकार्डाइटिस गराउनसक्छ । यसका साथै मुटुको धड्कनमा गडबडी र हृदयघातसमेत गराउनसक्छ ।
कोभिडले फोक्सोको असर गरेका कारण शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम गर्दछ र साथै कोभिडसँग लड्न शरीरमा निस्किएको एन्डिबडीजले इन्फ्लामेसन गराउँदा विभिन्न अंगमा असर गर्दछ । सामान्य व्यक्तिको तुलनामा मुटुरोगीहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुने संभावना बढी हुन्छ । सामान्य व्यक्तिमध्ये ८० प्रतिशतलाई कोभिड १९ को लक्षण नदेखिन पनि सक्छ ।
मुटुरोगी, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला, दम लगायतका दीर्घकालीन रोग लागेका धेरैजसो बिरामीहरुलाई मध्यम लक्षणदेखि लिएर जटिल कोभिडको लक्षण र समस्या आउने गर्दछ । उनीहरुमा कोभिडको जटिलता बढी हुने भएकाले मृत्युदर पनि उच्च छ ।
यस्ता व्यक्तिहरुको झण्डै १० प्रतिशत मृत्युदर रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा पाइएको छ । सामान्य व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्युदर दुई प्र्रतिशत भन्दा बढी देखिएको छैन ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले पहिलो लहरमा भर्ना भएका ९० जना मुटु रोगीहरुमा गरेको अध्ययनले ११ प्रतिशत मृत्युदर देखाएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा केन्द्रमा भर्ना भएका १३४ जना मुटुरोगीहरुमा गरेको अध्ययनले २३ दशमलव २ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखायो । दोस्रो लहरमा कडा खालको डेल्टा भेरियन्ट सक्रिय भएका कारण मृत्युदर बढेको हुनसक्छ । ६५ वर्ष नाघेका, मिर्गौलामा समस्या भएका र रगतको जाँचमा लिम्फोसाईट्स कम भएको, डीडाइमर उच्च भएका र मुटुरोग भएका बिरामीहरुको कोरोनापछिको मृत्युदर उच्च देखिएको छ । तसर्थ दीर्घकालीन मुटुरोगीहरु, दीर्घकालीन अन्य रोग भएका बिरामी र ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई कोराना संक्रमण भएमा समयमा नै चिकित्सकीय परामर्श लिई उपचारका विभिन्न पद्धतिहरु अपनाउनुपर्दछ । बेलैमा उपचार गराएमा हामी सबैले कोभिडलाई जित्न सक्दछौ ।
(डा. शेर्पा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
सर्वोच्च अदालतद्धारा सिटामोल सहज उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायत अत्यावश्यक औषधि सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । देशमा करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी औषधिको आवश्यकता धान्न सफल नेपालका औषधि